Filimada Fast & Furious 8 Iyo Begum Jaan Todobaadka Kowaad Lacagaha Ay Hindiya Kasoo Xareeyeen - Hablaha Media Network
Filimada Fast & Furious 8 Iyo Begum Jaan Todobaadka Kowaad Lacagaha Ay Hindiya Kasoo Xareeyeen
HMN:- Vidya Balan filimkeeda Begum Jaan ayaa hal todobaad ku guul dareestay ama Flop ku noqday madaama uu todobaadkiisa kowaad keenay 15.50 Crore (Trade Figure).
Raja weyn lagama qabo filimkaan inuu tiyaatarada baaqi kusii ahaado hadii uu dadaalana wuxuu gaari karaa 20 Crore waana mashruuc lagu qasaaray inkastoo xayeysiin balaaran loo sameeyay.
Begum Jaan 19 Crore ayaa lagu sameeyay qiyaas ahaana kooxda cajaladaha qeybiyaan 9 Crore ayay ka heli doonaan taasi oo ka dhigan in kooxda filimkaan iska leh kaliya 11 Crore dib ugu soo laaban doonto waxaana ka lumi doonto 9 Crore waana sababta uu Flop ku noqday.
Filimka weyn ee Hollywood-ka ah Fast & Furious 8 hal todobaad ayuu Super Hit gudaha Hindiya kaga noqday madaama uu keenay 65.25 Crore (Trade Figure) todobaadkiisa kowaad uu keenay sida shabakada Boxoffice India soo daabacday.
Lacagaha uu todobaadka kowaad keenay waxay Fast & Furious 8 ka dhigtay filimka sedexaad ee hal todobaad lacagaha ugu badan gudaha Hindiya kasoo xareeyo ee Hollywood ah kaliya The Jungle Book Fast & Furious 7 ayaa ka lacag badan.
Fast & Furious 8 cimri ahaantiisa 80 Crore wuu dhaafi doonaa waxayna u egtahay in 85 Crore keeni karo balse fursad badan ma heesto waayo todobaadka dambe filimka weyn Baahubali 2 ayaa tiyaatarada Hindiya oo dhan la wareegi doono.